Ecological Fund: Kedụ ihe ọ bụdị? - BBC News Ìgbò
Ecological Fund: Kedụ ihe ọ bụdị?
30 Ọktọba 2019
Oraifite: 'Mbuze a anapụla a m ihe niile m ji bụrụ mmadụ'
Gọọmentị Anambara na Ebonyi ekwuola na ha na-etinye ego 'ecological funds' steeti ha natara n'aka gọọmenti etiti n'ọrụ dịka o siri gbasa nsogbu gburugburu e nwere na steeti ha.
Nke a bụ ọsịsa ha nyere dịka "Ecological Fund" ghọrọ okwu akpụ n'ọnụ ka onye nnọchiteanya Isuikwuato/Umunneochi n'ụlọomeiwu nta bụ Nkiru Onyejeocha rụchara ndị gọvanọ aka si na o doghị anya ihe ha ji ego a gọọmentị na-adọbinye ha kwa ọnwa eme.
Onyejeocha onye kwuru nke a oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu kwuru na gọọment na amapụta ego 'eological fund kwa ọnwa mana ndị gọvanọ anaghị eji ya egbo mkpa e jiri mapụta ya bụ ego.
Mbuze gbawara ụzọ n'Ụmụawụlụ, lee etu o si bido
"Ecological Fund" bụ ego pụrụ iche nke gọọmentị Naijiria na-amapụta maka igbo mkpa nsogbu gburugburu nke mgbanwe ihu igwe na-ebute ọkachasị nsogbu mbuze, oke idemmiri, oke ala ọkpọrọ, nkwafu mmanụ agbịdị wdg.
Mbuze achụpụla ndị mmadụ n’ụlọ ha na Nanka
Ọ kpọrọ oku ka ekewapụta ego 'Ecological Funds' n'ego steeti na-eketa kwa ọnwa n'akpa ego a gọọmenti etiti a kpọrọ 'federal allocations' (FAC) na Bekee.
Mana gọọmentị Anambara site n'ọnụ kọmịshọna mgbasaozi bụ Don Adinuba, kwuru na okwu Onyejeocha emetụtaghị Anambara.
Adinuba, onye rụtụrụ aka na nzere ụlọakụ mbaụwa bụ World Bank nyere Anambara na September afọ 2018 dịka steeti kachasị etinye ego ha nwetara n'ọrụ sịrị, "E ji Anambara ama atụ n'ihe gbasara ego e ji arụ ọrụ obodo."
"Ego anyị na-enweta ezughị ihe anyị na-eme".
N'aka nke ọzọ, onye nnyemaka mgbasaozi Govano Umahi nke Ebonyi steeti bụ Ben Nwaze, kwuru na okwu Onyejeocha dị ka mmadụ ịbọ ozu ọ nọghị mgbe e liri."
'Mbuze abọpụtala ozu na Nnewi'
Ọ kọwara na n'agbanyeghị na, "Anyị na-agba mbọ ka ike anyị ha mana ọ bụ ihe nnukwu mwute na Anambara steeti bụ 'erosion capital' n'Afrịka."
"Ụdị ala anyị, etu e si arụ ụlọ ebe mmiri si apụ na ikpofu ahịhịa na-ebe ekwesịghị so n'ihe na-eme ka nsogbu ahụ kawanye njọ."
Ihe ndị ị maghị maka 'Ecological Fund'?
"Ecological Fund" bụ ego pụrụ iche nke gọọmenti Naijiria na-amapụta maka igbo mkpa nsogbu gburugburu site n'ịmapụta otu pasentị n'ime ego 'Federal allocation.'
E hiwere nke a n'afọ 1981 dịka Kọmitii pụrụ iche nke "Okigbo Commission" nọ n'isi ya tụpụtara ya n'alo.
Gọọmentị na-emejupụta ya site na ngalaba 'Ecological Fund Office'.
Steeti na-eketa ego 'Ecological Fund' nke a na-etinye n'ego nketa ha na-enweta kwa ọnwa site n'akpa ego gọọmenti etiti.
Ma gọọmenti etiti na steeti emefuola ego Ecological fund site na itinye ya n'ebe ekwesịghị. Ọmụmatụ: n'afọ 2018, Onye nnyocha pụrụ iche nke gọọmmenti etiti (Auditor-General of the Federation) gbara ama na e tinyere ijeri naira iri abụọ na asatọ na ụmwa(N28.286billion) ego ecological fund n'ebe ekwesịghị.
Ọtụtụ ndị gọvanọ bụkwa ndị eborola ebubo imefu maọbụ zufo ego ecological fund steeti ha na-eketa.
Vidio, Gwamnishu sị na ya gara nga maka ihe ọ meghị pụtazịrị ihe ịnyere ndị nọ n'udi ọnọdụ ahụ aka
6 Mee 2021
Ndị uweojii egbuola ọtụtụ ndị ji egbe chọrọ iwakpo ụlọ ọrụ ha n'Ọrlụ
nkeji 31 gara aga
Gịnị bụ 'asylum' ndị Briten chọrọ inye ndị Ipob na Massob?
Vidio, Lee megharị ahụ ise ụmụnwaanyị dị ime ekwesịghị ime, Duration 3,22
Ihe ndị ị na-eme nwere ike ịduba gị n'ọrịa 'Kidney disease'
Father Mbaka: Bishop Onaga enyeela ndị ụka Katọlik n'Enugu ọpịpịa abalị asaa maka ime ngagharịiwe
Onye bụdị Sheikh Gumi a ndị mmadụ kpụ n'ọnụ?
Etu e si tọọrọ ụmụakwụkwọ ABSU n'ụzọ si Uturu gawa Okigwe
Ralph Uwazuruike sị na ọ nwuchiri Nnamdi Kanu mgbe ọ na-agbankwụ ma kpọchie ya abalị ise
Ihe mere eji adọrị Desmond Elliot ka kanda na Social Media
Anyị ka na-eche ịhụ ụmụ anyị - Nna otu n'ime ndị a tọhapụrụ
Ihe mere Bill na Melinda Gates ji gbasaa dịka di na nwunye